Media - Vayodha Hospitals Pvt Ltd.Vayodha Hospitals Pvt Ltd.
– डा. श्रद्धा श्रेष्ठ काठमाडौं – थाइरोइड घाटिँको पछाडि पुतलीको आकारमा रहेको ग्रन्थि हो । यो ग्रन्थिबाट थाइरोक्जिन हर्मोन निस्कन्छ । यो हर्मोन शारीरिक विकास, हड्डिको विकास तथा घनत्व कायम राख्न, शरीरको तापक्रम ठिक मात्रामा बनाइ राख्न, भुण्रको मानसिक तथा शारीरिक विकास, शरीरको चयपचय जस्ता कार्यहरु कायम राख्न आवश्यक पर्छ । गर्भावस्था भन्दा अगाडि वा गर्भावस्थामा… Read more »
टाउकोमा रक्तनलीको प्रवाह थुनिएको वा रक्तनली फुटेर रगत बगेको अवस्थामा पक्षघात हुन्छ । यो एक्कासी हुने कुरा हो । पक्षघातबारे जनमानसमा त्यति सकारात्मक सोच छैन । यो हृदयघात जस्तैं हो । यसलाई मष्तिस्कघात भनेर बुझँे पनि हुन्छ । यसको उपचार जटिल छ तर कतिपय अवस्थामा पक्षघातका बिरामीलाई पुर्ण निको पार्न सकिन्छ । लक्षणहरू वयोदा अस्पतालमा… Read more »
बालबालीकामा पनि लाग्न सक्छ बाथ गरौँ यसरी पहिचान
काठमाडौं – बाथ यस्तो रोग हो जसले भर्खर जन्मेको शिशु देखि बृद्धा अवस्थाका व्यक्तिहरुलाई प्रभाव पार्न सक्छ । बाथ रोगले शरीरको भित्री जुनसुकै अंगलाई पनि असर गर्न सक्छ । यो शरीरको छाला, जोर्नी मासु, कम्मर, आँखा, मांशापेशी लगायत अन्य अंगबाट सुरु हुने बल्खुस्थित बयोधा अस्पतालमा बाथ रोग बिशेषज्ञको रुपमा कार्यरत डा. लोभ राज लोहनीले बताए ।… Read more »
गर्भावस्थामा हुने मधुमेहको जोखिम तथा बच्ने उपाय
काठमाडौं – गर्भावस्थामा हुने मधुमेह भनेको गर्भवती भएको समयमा हुने मधुमेह हो । यो मधुमेह गर्भ रहनु अगाडि वा प्रसुती पश्चात रहदैँन । गर्भवती हुदाँ शरीरका विभिन्न हर्मोन (कोर्टिसोल, एसट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलाक्टिन, प्लासेन्टल ग्रोथ हर्मोन) को परिमाण शरीरमा बढ्न जान्छ । साथै आमाको शरीरमा अन्य तत्व (अडिपोसाइट्स, इमुन सेल्स, हिपाटोसाइट्स) मा परिर्वतन,आमामा शारीरिक कसरतको कमी, मोटोपना,… Read more »
श्रीलंकाबाट सागमा आएका एथ्लेटिक्सका दुई खेलाडीलाई डेंगु, वयोधामा उपचार हुँदै
काठमाडौं, २३ मंसिर । नेपालमा जारी १३औं दक्षिण एसियाल खेलकुद (साग) मा सहभागि हुन आएका श्रीलंकाका दुई खेलाडीमा डेंगु देखिएको छ । एथ्लेटिक्सका यी दुई खेलाडीमा डेंगु देखिएपछि बल्खुस्थित वयोधा अस्पतालमा उपचार भइरहेको अस्पतालका डा. कन्चन गोइन्काले जानकारी दिएका छन् । डेंगु संक्रमण हुनेमा २८ वर्षीया अस्ना डिस्पाल र मेन्का माधवी गेम कान्जी रहेका छन् ।… Read more »
बयोधा अस्पतालमा मधुमेह, थाइराइड तथा बाथ रोगको निशुल्क सेवा शुरु
काठमाडौं – बयोधा अस्पतालमा आजदेखि मधुमेह, थाइराइड तथा बाथ रोगको निः शुल्क स्वास्थ्य परामर्श सञ्चालन भएको छ । अस्पतालमा परामर्शका साथै बिशेषज्ञद्धारा सिफारिस गरिएको जाचँमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको अस्पताल प्रशासनले जानकारी दिएको छ । परामर्श लिन इच्छुक व्यक्तिले अग्रिम नाम दर्ता गराउनुपर्ने र प्याथोलोजी सेवामा मात्र छुट दिइने अस्पताल प्रशासनको भनाई छ । अस्पतालले… Read more »
‘बि हार्ट हिरो’ भन्दै वायोधा अस्पतालले मनायो विश्व मुटु दिवस
काठमाडौं – आज विश्व मुटु दिवसको अवसर पारेर वायोधा अस्पतालले मुटु रोग सम्बन्धि जनचेतना फैलाउदै प्रभातफेरि निकालेको छ । वायोधा अस्पतालबाट सुरु गरेको प्रभातफेरि कुलेश्वर , कालीमाटी , टेकु , कालोपुल सानेपा हुदैँ बल्खु पुरेर टुगिंएको छ । ‘बि हार्ट हिरो’ नाराका साथ मुटुलाई स्वस्थ राख्ने प्रतिबद्धता लिनुस् भन्दै १५० जना उक्त प्रभातफेरिमा सहभागि भएका थिए… Read more »